Truckgbọ eletrik nke Tesla ga-adị ọnụ ala karịa nke ọhụrụ Roadster | Akụkọ akụrụngwa
Naanị otu izu gara aga ka anyị maara nzọ ọhụrụ nke Elon Musk na Tesla na mpaghara akụrụngwa. Dị ka anyị niile maara nke ọma, na mgbakwunye na ịchọrọ ịkụ nzọ na ụgbọ ala, Elon Musk makwaara na na ụlọ ọrụ na-adọkpụ ụgbọala, e nwere nnukwu ahịa iji chọpụta. O mere nke a site na iwebata igwe eletrik ya zuru oke nke amara dị ka Ọkara Semi.
Enwere ike idobe ụgbọala a, a ga-enyekwa ndị nke mbụ na 2019. E kwuru na Nchekwa mmanụ mgbe afọ abụọ zụrụ ruru ihe dị ka $ 200.000. Agbanyeghị, ekwurịtabeghị ihe ọnụ ahịa ya ga-abụ 1, ihe mere n'ụgbọala na-eso aga nke mmemme ụtụtụ n'isi. Kpọmkwem, ndị Lazọ Tesla ọgbọ nke abụọ.
Dị ka akọwapụtara na ngosi ahụ, ọgbọ ọhụrụ nke Roadster ga-efu $ 200.000 (ihe dị ka euro 170.000 na ọnụego mgbanwe ugbu a). Site na mbido, iji debe ya, ndị ọrụ ga-akwụrịrị euro 50.000 mbụ. Ọfọn, ụbọchị ole na ole, nkọwa ndị ọzọ banyere Tesla Semi, ụgbọ ala eletrik, amabuworị. O juru onye ọ bụla anya na ụgbọ ala a ga-efu ihe dị ntakịrị. Kedu ihe ọzọ, anyị nwere ike ịkwado gị na ị ga-echekwa ego ma e jiri ya tụnyere Tesla Roadster.
A ga-enwe nsụgharị abụọ nwere ikike dị iche iche. Versiondị ntọala nwere ọtụtụ kilomita 500 na otu ụgwọ ga-akwụ ụgwọ na 150.000 dollar (Euro 127.000 ịgbanwe). Mgbe ọ bụrụ na onye ọrụ opts maka version na a nso nke ruo 800 kilomita na otu ụgwọ, na price ga-ebili na- 180.000 dollar (Euro 152.000 ịgbanwe).
Dị ka ọgbọ nke abụọ Tesla Roadster, Tesla na-akwado nkwado nke Tesla Semi a. Ugbu a, iji mee ka ọ dị irè ị ga-emerịrị kwụnye $ 20.000 (Euro 17.000). Ya mere, ụlọ ọrụ ndị na-ebuga ngwa ngwa nwere ike ịme ndoputa maka ụdị ndị a iji gbakwunye n'ụgbọ ha ma hụ otu esi egbutu nsị na mmanụ dizel.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Truckgbọ ala eletriki nke Tesla ga-adị ọnụ ala karịa okporo ụzọ ọhụrụ ya